डराइएको कठोर: परिचय धोखा र ईन्टरनेट | Martech Zone
डराइएको कठोर: परिचय धोखा र ईन्टरनेट
बिहीबार, मार्च ० 1, २०२० शुक्रबार, मार्च 9, 2007 Douglas Karr
एबीसीको २०/२० का जोन स्टोसेल एक थियो गत हप्ता शानदार कार्यक्रम, डराइएको कठोर: अमेरिकामा चिन्ता। उनले हाम्रो जीवनमा मिडियाको प्रभाव र यसले कसरी जनता र यसको भयलाई असर गर्दछ भन्ने कुराको बारेमा ठोस डेटा प्रदान गरे।
(उनी पनि थिए फ्रीकोनोमिक्सबाट स्टीफन डबनर शो मा, त्यसैले मैले यो हेर्नुपर्‍यो!)
उनले पहिचान गरेको समस्या यो हो कि हामीले चिन्तित धेरैजसो कुराहरू वास्तवमै जोखिमपूर्ण हुँदैनन्। एउटा चौंकाउने उदाहरण भनेको लोड गन वा पौंडी पोखरीको तुलना हो ... पोखरीले भरिएका बन्दुक भन्दा धेरै बच्चाहरूलाई मार्दछ। केही कारणका लागि, हामी हाम्रा बच्चाहरूलाई पोखरीको साथ घर पठाउन डराउँदैनौं ... तर हामी उनीहरूलाई कहिल्यै भारी बन्न बन्दुक भएको घरमा पठाउँदैनौं।
यस हप्ता, डर मसँग घर पुग्यो। म नराम्रो विवरण छोड्ने छु, तर म एक सामाजिक नेटवर्कि site साइटमा सामेल भयो जुनसँग तपाईंको पारिवारिक सम्बन्धहरू निर्माण गर्न र तपाईंको 'नेटवर्क' लिनको लागि र तपाईंको आफ्नै नै बढ्नको लागि केही शानदार उपकरणहरू थिए। साइट को चाल यो थियो कि तपाईं आफ्नो परिवार र तपाईंको सम्बन्धहरूको सबै प्रविष्ट गर्नुभयो ... अनुप्रयोगले बाँकी काम गर्दछ ... लगइन गर्न परिवारको निर्माण जारी राख्न तिनीहरू प्रत्येकलाई सम्पर्क गर्दै। यो सबै सही सुविधाहरूसँग एक अद्भुत अनुप्रयोग हो ... एक भाइरल कम्पोनेन्ट, एक उपकरण, एक सम्पर्क डेटाबेस, सबै एक spiffy सानो वेब २.० प्याकेजमा।
यहाँ रब छ ... तपाईं आफ्नो परिवारको जानकारी प्रविष्ट गर्नुहोस्। मैले पूरै पार्टीलाई लात हान्ने र मेरो परिवारको डाटा त्यहाँ राख्ने अत्यन्तै गुनगुनाएँ। त्यसपछि आवेदनले मेरो परिवारको प्रत्येक सदस्यलाई सम्पर्क गर्‍यो। युवा व्यक्तिहरू ठीक मा समातिए र आफ्नो नेटवर्क बनाउन शुरू गरे। यो पुराना मान्छे संग एक फरक कहानी थियो। तपाईंले सोच्नुभएको होला मैले लिनका लागि मेरो परिवारको राहदानी र क्रेडिट कार्ड अनलाइन पोष्ट गर्‍यो! तिनीहरू बिल्कुल डराएका थिए कि म यस्तो काम गर्नेछु। भयभीत!
पहिचान चोरी, पहिचान चोरी !!! मेरो विवेक, बुद्धिमत्ता, र - सबै मेरो विश्वास को - तुरुन्त प्रश्न मा राखियो। फ्लेमिंग ईमेलहरूले फ्लेमिंग ईमेलहरू अनुसरण गर्यो ... मलाई यो अविश्वसनीय खतराको बारेमा शिक्षा दिँदै र मेरो परिवारलाई जोखिममा राख्नको लागि म कति लापरवाह थिए। यद्यपि म पहिचान चोरीको बारेमा चिन्तित थिइनँ, मैले प्रश्नमा लगत पाउनको लागि कम्पनीमा छिटो ट्र्याक गरें र कुनै पनि सम्बन्धित डाटा… तुरुन्त तल झिकियो। त्यसले हप्काउदैन मैले तपाईंलाई भनेको छ ... 38 XNUMX बर्षको उमेरमा र उद्योगमा मसँग एक दशक पछि, तपाईंले सोच्नु हुन्छ म स्प्याम पछि नेटमा हुने सबैभन्दा खराब चीज हो।
म यस पोष्टको लागि पनि समस्यामा पर्नेछु ... चाँडै कहिले समाप्त हुँदैन। यदि केसको फैसला भयो र सार्वजनिक कोर्रा लगाई समाप्त भयो भने, त्यसले मलाई बचत गर्ने छैन। मलाई लाग्छ म सबै इच्छाहरू बन्द छु।
जोन Stossel सही छ। व्यापार र मिडिया द्वारा यो डर-mongering बिल्कुल नियन्त्रण बाहिर छ। तथ्य यो छ कि व्यापार पहिचान चोरीको वास्तविक पहिचान चोरी भन्दा असीम बढी पैसा विनिमय हुनेछ। तर यसले लेनदारहरू, सरकार र मिडियाको ध्यानाकर्षण गर्‍यो त्यसैले यो केहि समयको लागि सुर्खाहरूमा हुनेछ। हाम्रो सबै डाटा यसमा उजागर गरिएको छ खराब इन्टर्नेट र हामी चाँडै नै सबै समाहित हुनेछौं। त्यहाँ कुनै रोक छैन। हामीले सक्यौं। संसारको अन्त्य हुँदैछ।
वा यो हो?
अनुसार तथ्याङ्क, American of ..69.4% सबै अमेरिकी घरपरिवारले अब इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्। चौंकाउने २१०,००,००० अमेरिकीहरू अहिले इन्टरनेटमा छन्। र त्यस्तै तिनीहरूको क्रेडिट कार्ड जानकारी, तिनीहरूको क्रेडिट इतिहास, उनीहरूको छिमेकको नक्शा, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा जानकारी, तिनीहरूको कम्पनी लाभ, उनीहरूको लगानी र उनीहरूको (निकट संरक्षित) मेडिकल ईतिहास पनि हो।
वाह ... ती प्रकारका नम्बरहरूको साथ, त्यहाँ लाखौं व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ पहिचान चोरीबाट, सही? राम्रो ... होईन।
यस अनुसार FTC२०० 246,000 मा पहिचान चोरी गुनासाहरूको २ 2006,००० घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको थियो (२०० 255,000 मा २ 2005,००० बाट तल)। ठिकै छ कि १,००० इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा १ छ, हैन?
एफटीसीका अनुसार, सबै पहिचान चोरी उजुरीको १. 1.9.% मात्र इन्टरनेटको बिरूद्ध गरिएको थियो। ,,4,674 मानिस। त्यसोभए सबै पहिचान चोरी गुनासाहरूको 98.1 .0.0022 .१% इन्टरनेटमा सम्बन्धित थिएन। केहि गणित गरौं…। त्यो ०.००२२% छ तपाइँको पहिचान इन्टर्नेटबाट चोरी गर्न। वा प्रत्येक 1 45,000,००० व्यक्तिमा १। The देखि%% पहिचान चोरी डेटा भaches्गको कारण भयो स्रोतमा, धेरै जसो वित्तीय संस्थामा भइरहेको छ र शारीरिक चोरी पनि, इलेक्ट्रोनिक रूपमा छैन।
मैले समीक्षा गरेको सबै डाटामा मैले एकल गुनासो पाउन सकिनँ, जहाँ पीडितको डेटा तेस्रो पक्षको वेबसाइटबाट इलेक्ट्रोनिक रूपमा ह्याक गरिएको थियो। एकल गुनासो छैन।
अझै डराएको छ? तपाइँको बाधाहरू हत्या हुने वा गिरावटबाट मरेका वा कार दुर्घटनाबाट मर्दा वा आफैंले घाइते बनाएको चोट पनि तपाईंको इन्टरनेटमा पहिचान फ्रडको शिकार हुनुको अनौठोभन्दा बढी हो। वास्तवमा, अर्को शताब्दीमा पृथ्वीको क्षुद्रग्रहले ठक्कर दिने सम्भावनाहरू तपाईं इन्टरनेटमा पहिचान फ्रडको शिकार हुनु भन्दा बढी हुन्छ।
ध्यानमा राख्दै, म त्यो सबै थप्ने छु, यदि त्यसो भएन भने, ती इन्टरनेट पहिचान फ्रड केसहरू एक फिसि of स्कीमको कारणले भयो ... जहाँ एक प्रयोगकर्ताले एक नक्कली साइटमा लग इन गर्‍यो जुन तपाईंको पहिचान चोरीको एकमात्र उद्देश्यको लागि त्यहाँ राखिएको थियो। तिनीहरू वैध साइटहरूबाट आएका छैनन् जहाँ व्यक्तिहरूको पहिचान चोरी भएको थियो।
किन छैन? त्यहाँ केही कारणहरू छन्, तर कुञ्जी भनेको राम्रो हो कि इन्टरनेटको बचतको रूपमा छ तपाईंको डाटा, यो जानकारीको प्रत्येक प्याकेट रेकर्ड गर्नमा पनि उत्कृष्ट छ जुन यस मार्फत चल्दछ। के तपाईंले कहिल्यै याद गर्नुभयो कि बच्चा पोर्नोग्राफी राउन्डअप पछि मानिसहरू कती चाँडो ट्र्याक हुन्छन्? कसैको लागि आफ्नो स्थानीय वित्तीय संस्थाबाट केही कागज चोर्न यो वेबबाट पुन: प्राप्त गर्न प्रयास गर्नु भन्दा धेरै सजिलो छ।
निष्कर्षमा ... चिन्ता गर्न रोक्नुहोस्। सुरक्षा र मिडिया कम्पनीहरूमा ... सबै डर mongering रोक्नुहोस्! अवश्य पनि म तपाईलाई आफ्नो पहिलो नाम पासवर्डको रूपमा प्रयोग गर्न सल्लाह दिदिन र तपाईको क्रेडिट कार्ड जानकारी तपाईको प्रोफाइलहरूमा छोड्नुहोस्, तर तपाईले वैध साइटमा लग ईन गर्नुपर्ला र अर्को दिन तपाईको बैंक खाताहरू खाली भएको पनि डराउनु पर्दैन। यो मात्र त्यस्तो हुने छैन। त्यहाँ चिन्ता गर्न अझ महत्त्वपूर्ण चीजहरू छन् (जस्तै तपाईको परिवारसँग स्वस्थ र भरोसा सम्बन्ध रहेको छ)।
र यदि तपाईं सिकार हुन सक्नुहुन्छ कुनै पनि ठगी, यहाँ केहि छ सल्लाह.
तपाईंको फायरफक्स खोज बक्सलाई अनुकूलित गर्नुहोस् (तपाईंको आफ्नै ब्लगको साथ!)
मार्स 1, 2007 मा 9: 18 एएम
उत्कृष्ट पोष्ट म बुझ्दिन कि किन मानिसहरू आफैंको बारेमा आधारभूत जानकारी इन्टरनेटमा राख्न को लागी विवेकपूर्ण छन्, खास गरी यो कि धेरै जसो गैर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमबाट पाउन सकिन्छ। धेरै जसो भागका लागि, म मान्छेको ठेगानाहरू, फोन नम्बरहरू, विवाह मितिहरू, बच्चाहरूको जन्मदिन, र केहि केसहरूमा उनीहरूको तलब प्राप्त गर्न सक्दछु - सबै एक कम्प्युटरमा पहुँच नगरीकन (यद्यपि यसलाई थोरै कामको आवश्यक पर्न सक्छ)। तपाईको तस्विर अनलाइन पोष्ट गर्नु भनेको तपाईको SSN प्रसारण गर्नु जस्तो केही छैन।
मलाई लाग्छ कि व्याकुलता कसरी ले व्यावसायिकहरूले सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ (वा सम्भवतः तथ्या that्कहरू यसका कारणले हुन्)। व्यवसायहरूले पैसा एक SSL प्रमाणपत्र र फायरवालमा खर्च गर्छन्, तर उनीहरूले कब्जा गरेको जानकारी प्रिन्ट गरिएको छ र अनलक कैबिनेटमा फाइल गरिएको छ जहाँ कोही पहुँच गर्न सक्दछन्। निस्सन्देह, त्यहाँ धेरै व्यवसायहरू छन् जसले इन्टर्नेट सुरक्षा पनि राम्रोसँग संचालन गर्दैनन्, तर मँ चाहन्छु कि औसत साना व्यवसायको तुलनामा अपेक्षाकृत नराम्रो सुरक्षा हुन्छ, एक बैंक, जब यो तिनीहरूको वेबसाइटको भन्दा भौतिक कार्यालयको कुरा आउँदछ।
मार्स 22, 2007 मा 10: 14 एएम
यो देखिन्छ TJX मलाई गलत साबित गर्न सक्दछ... तिनीहरूले क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरूको डेटाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने सल्लाह अनुसरण गर्दैनन् ताकि तिनीहरूको प्रणाली ह्याक गरियो र क्रेडिट कार्ड डाटा चोरी भयो। यस चोरीको प्रभावको बारेमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन, तर यो हाम्रो इन्टर्नेट इतिहासको क्रेडिट कार्ड डाटाको सबैभन्दा ठूलो ह्याक हुन सक्छ!
अप्रिल 10, 2007 मा 3: 27 PM
हे डग, जानकारीपूर्ण लेख को लागी धन्यवाद। मलाई थाहा थिएन कि कसरी बढि फुलेको तथ्यांकहरू थिए जबसम्म तपाईंको तथ्या statistics्कले यसलाई परिप्रेक्ष्यमा राख्दैन। मलाई लाग्छ यसले अझै पनि मद्दत गर्दछ कि मानिसहरू उनीहरूको जानकारीलाई ध्यान दिए बिना सावधान रहन। सानो ठेगानाले वेब ठेगाना हेरेर फिशिंग रोक्न मद्दत पुर्‍याउँछ (एक पेपैल ईमेलले तपाईंलाई तपाइँको क्रेडिट कार्ड जानकारी दिनको लागि भन्दै, तर माथिको ठेगानामा कुनै पनि ठाउँमा "paypal" छैन)। थोरै सामान्य ज्ञान र सावधानी अझै धेरै लामो यात्रा गर्छ।